Liverpool oo u dhaqaaqaysa soo xero-gelinta xiddig ka ciyaara horyaalka Premier League… (Booskee ayuu ka dheelaa?) – Gool FM
(Liverpool) 15 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa inay doonayso inay gacanta ku soo dhigto xiddig Jarmal ah oo ka ciyaara horyaalka Premier League sida wararku ay sheegayaan.
Liverpool ayaa qorsheynaysa inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Naadiga Brighton & Hove Albion, Pascal Gross – sida laga soo xigtay Jariiradda Tuttomercatoweb.
Xiddiga reer Jarmal ayaa warbixinta lagu sheegay inuu doonayo qudhiisu inuu u dhaqaaqo garoonka Anfield.
Tababare Jurgen Klopp oo laftiisu Jarmal ah ayaa si aad ah ula dhacsan 30-sano jirkaan, kaasoo dareensan in haatan la joogo waqtigii uu u dhaqaaqi lahaa koox weyn.
Gross ayaa sidoo kale xiiso ka helaya kooxaha ka dheela horyaalka Serie A, waxaana Brighton laga yaabaa inay isku daydo inay lacag kaash ah dhaafsato ka hor inta uusan noqon beeca xorta ah sanadka 2022-ka.
Muxuu ka dhigan yahay laadkii xorta ah ee Lionel Messi uu xalay ka dhaliyey Chile?... (Yaa Freekicks badan haatan Leo & CR7?)